हजारौं जनसमुदाय ज्ञापनपत्र बुझाउन रुकुमकोट प्रस्थान « Postpati – News For All
हजारौं जनसमुदाय ज्ञापनपत्र बुझाउन रुकुमकोट प्रस्थान
कर्मसही घर्ती मगर/२३ माघ, रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडामा स्थापना हुनु पर्छ भनेर हजारौं जनसमुदायको गोलखाडाबाट रुकुमकोट प्रस्थान गरेको छन् । गोलखाडामा भएको औपचारिक कार्यक्रम पश्चात् ज्ञापनपत्र बुझाउन रुकुमकोट प्रस्थान गरेका हुन् ।
हिजो भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जितमान पुन ‘मार्सल” ले हाम्रो पाइला जहाँसम्म लम्किन्छ । हामी त्यहीसम्म जानेछाैँ भने । अतिथि पुनले भने -‘हाम्रो रगत पसिनाबाट पालिएका प्रशासनले हामीलाई अस्थाई सदरमुकामसम्म जानमा षड्यन्त्र गरेर रोक लगाएको छ । तर हामी त्रसित हुने समुदाय होइनाैँ । हामी आफ्नो बाटोमा जतिसुकै बाधा अड्चन आए पनि सहजै त्यसको समाधान गर्ने खुबि राख्दछाैँ । त्यसैले अब हाम्रो पाइला अस्थाई सदरमुकातिर लम्किँदैछ । हाम्रो शिर छेँडिए पनि हामी झुक्ने छैनौं । दस बर्षे जनयुद्धमा खारिएका हाम्रा ताकतहरू अब जाँच्ने बेला आएको छ ।” नेता पुनले भने -‘हाम्रा बयोबृद्ध नेताहरू कुटिएका छन् । हामीले दुई चार जना नेतालाई कुटेको ठानेका छैनाैं । हामीले हाम्रो पहिचान र हाम्रो मर्ममाथिको जगन्य प्रहार भएको ठानेका छाैँ । हामीले सिङ्गो पर्वतेमाथिको कुठाराघत भएको ठानेका छाैँ । को सँग कसरी लडाईं गर्नु पर्छ हामीलाई राम्रो सँग थाहा छ । हामी हाम्रो अधिकार स्थापित गर्न जस्तोसुकै बाधासँग जुझ्न पनि तयार छाैँ ”
हजारौं जनसमुदाय सदरमुकाम गोलखाडा हुनु पर्छ भनेर ओर्लिएको बताउँदै प्रमुख अतिथि जितमान पुनले भने- ‘हाम्रो रगत र पसिनाको करबाट पालिएर देशको सुरक्षा संयन्त्रमा पुगेकाहरूले कसको इशारामा हजारौं जनसमुदायको आन्दोलित हुन पाउने लोकतान्त्रिक अभियानमा रोक्न खोज्दैछ ? को मार्फत यो कुटिल षड्यन्त्र भैरहेको छ ? हामीहरूलाई सबै नालीबेली थाहा छ । हिजोको दिनमा जनसमुदायको भोट पाएर आज माथि पुगेकाहरूद्वारा नै आफ्नै जनतालाई , आफुले टेकेको भुईलाई लात मारिरहेका छन् । अब जनताले हाम्रा मान्छे चिन्ने बेला आएको छ । हिजोका पञ्चायति व्यवस्थाको जस्तो बर्बरता र पक्षपाती व्यवहार जनसमुदायमाथि लादिएको छ । यसको कुनै हालतमा पनि प्रतिकार गर्न हामीलाई बाध्य पारिँदैछ ।”
हजारौं जनसमुदायको बीचमा बोल्दै नेता पुनले भने -‘हामीलाई दुखेपछि अइया ! भन्न पनि नपाइने यो कहाँको लोकतान्त्रिक पद्धति हो ? हामीले आफ्नो अधिकार खोजेका हाैमम । लोकतान्त्रले दिएको संघियताको असली मर्म बुझियोस् भनेका हाैँ । यसैको लागि हामीले हाम्रो कलस्तरको सदरमुकाम मागेका हाैँ ।”
गोलखाडा सदरमुकाम स्थापनार्थ सरोकार समितिका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका सञ्चालन सदस्य पुनिराज घर्तीको रहेको थियो । कार्यक्रममा स्वागत भाषण जुद्ध बहादुर बुढाले गरेका थिए । नेता बुढाले यो सदरमुकाम कुनै पनि पार्टीको लबिङ नभएर सिङ्गो पिछडिएकाहरूको लबिङ भएको र यसमा क्षेत्रको , पहिचानको लडाइँ भएकोले सबै एकजुट भएर लक्ष्यमा पुग्नै पर्ने बताए ।
सभाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पुनले हामीले पहिचान खोजेर के बिगारेका छाैँ ? जसले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहार गर्न खोजिएको छ । हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्न कर्फ्युको आदेश लगाइएको हो भने ।
कार्यक्रम दिउँसोको १२:३० बजे शुरु भएर १:३० बजे सम्म गोलखाडाको विद्यालय प्राङ्गनमा समापन भएको थियो । हजारौंको जनसमुदाय अब ज्ञापन बुझाउन र प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान पनि चलाइएको थियो ।